कसरी ब्लग आला छान्ने - Victor Mochere
एक ब्लग आला छनोट गर्नु भनेको तपाईको ब्लग सुरु गर्ने सबैभन्दा सजिलो वा कठिन भाग हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा स्थान छनोट गर्नु हो जसमा तपाई आफैंलाई एक अधिकार भन्न सक्नुहुन्छ - नयाँ ब्लगरहरूले यस्तो भीडभाड ब्लगस्फेयरमा गर्ने सबैभन्दा ठूलो गल्ती भनेको केहि अचम्मको वा फरक गर्ने प्रयास नगरी ब्लग सुरु गर्नु हो। उदाहरणका लागि, यदि फेसन तपाईंको कुरा हो भने, जेनेरिक फेसन सामग्रीको संयोजन गर्नुको सट्टा, तपाईंले वातावरणप्रति सचेत डिजाइनरहरूको बारेमा ब्लग गरेर वातावरणको लागि आफ्नो ठूलो मनको चासोसँग कपडाहरूप्रतिको आफ्नो मायालाई संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ तपाइँको नयाँ ब्लग को लागी एक आला खोज्न को लागी सबै भन्दा राम्रो तरिकाहरु छन्।
1. अन्य ब्लगहरू हेर्नुहोस्
2. Google प्रयोग गर्नुहोस्
3. सामान्य सोधिने प्रश्नहरूको लागि फोरमहरू खोज्नुहोस्
4. हालको प्रवृत्तिहरू ट्र्याक गर्नुहोस्
5. विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरूको बारेमा सोच्नुहोस्
6. आफ्नो रुचि र आवेग पहिचान गर्नुहोस्
यो तपाईंको कलको पहिलो पोर्ट हुनुपर्छ। के पहिले नै सफल छ? र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, के हराइरहेको छ? बजारमा खाली ठाउँहरू फेला पार्नुहोस्।
मानिसहरू के खोजिरहेका छन्? गुगलले सुझाव दिएका खोजहरू प्रयोग गर्नुहोस् र मानिसहरूले के खोजिरहेका छन् भनेर पत्ता लगाउन स्वत: पूर्ण गर्नुहोस् - यदि तिनीहरूले यो खोजिरहेका छन् भने, यसले त्यहाँ माग रहेको देखाउँछ।
जब मानिसहरूले आफ्ना प्रश्नहरूको जवाफ पाउन सक्दैनन्, तिनीहरू फोरमहरूमा जान्छन्। तिनीहरू के सोध्छन्? उनीहरूलाई के सल्लाह चाहिन्छ? यसले देखाउनेछ कि मानिसहरू केमा रुचि राख्छन् र केमा उपलब्ध जानकारीको कमी छ।
अहिले सञ्चारमाध्यममा के–के विषय छन् ? दीर्घायु भएको विषय छनोट गर्नु राम्रो हो, तर यदि तपाइँ प्रारम्भिक प्रवृतिमा पिगी-ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ भने, तपाइँ चाँडै अरू कसैको अगाडि आफैलाई यसमा विशेषज्ञको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ। Twitter मा #journorequest खोजी गर्दा पत्रकारहरूले हाल कस्ता विषयवस्तुहरूमा रिपोर्ट गरिरहेका छन् भनेर देखाउँछ।
के तपाइँ ट्यूटोरियल/कसरी गाइड गर्न सक्नुहुन्छ? समीक्षाहरू? अन्तर्वार्ता? सूचीहरू? यो तपाईले लेख्नु भएको होइन, तर तपाई कसरी लेख्नुहुन्छ जसले तपाईलाई अलग बनाउँछ।
जबकि माथिका सबै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यहाँ कुनै चीजको बारेमा ब्लगिङ गर्नुको कुनै अर्थ छैन जुनमा तपाईलाई शून्य रुचि छ। तपाईलाई छिट्टै बोर हुनुहुनेछ र मानिसहरूले तपाईको उत्साहको कमीलाई देख्नेछन्। तपाईलाई साँच्चै मनपर्ने कुराको बारेमा लेख्नुहोस्।
पोकरमा ढिलो खेल्ने कार्य
मेरो प्रतिबिम्ब, यो मेरो जन्मदिन मा